ज्योतिषमा सूर्य ग्रहको महत्व र प्रभाव, The importance and influence of the Sun planet in astrology, Mero Jyotish | Mero Jyotish
ज्योतिषमा सूर्य(Sun) ग्रहको महत्व र प्रभाव
सूर्यबाट नै हामीलाई ऊर्जा वा प्रकाश प्राप्त हुन्छ। यसले जीवनलाई प्रकाशमय गर्दछ। हिंदू धर्ममा सूर्यलाई देवता मानिन्छ। हिंदू धर्ममा सूर्यको उपासना गरिन्छ। परन्तु यसको अर्को पक्ष भनेको वैदिक ज्योतिषमा सूर्य एक ग्रहको रूपमा रहेको छ र ग्रहहरुमा यसलाई श्रेष्ठ मानिन्छ। यो लेखमा हामी सूर्य ग्रहको बारेमा विस्तार सँग जान्नेछौँ । हामी जान्नेछौँ कि सूर्य (sun) को वैदिक ज्योतिषमा के महत्व छ? यसको साथै वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा सूर्य ग्रहलाई किन महत्व दिईन्छ ? सूर्य ग्रहको पौराणिक मान्यता के छ ? सूर्य ग्रहको मन्त्र, रत्न, रंग के हो ? यो लेखमा हामी यहि विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौं।
सूर्य ग्रहलाई यदि खगोलीय दृष्टिबाट हेरिन्छ भने यो सौर्य मण्डलको केन्द्रमा स्थित छ। त्यसैले यो पृथ्वीबाट धेरै नजिक छ। सूर्यको कारणले नै पृथ्वीमा जीवन सूचारू रूपमा कालान्तरबाट चलिरहेको छ। खगोल विज्ञान अनुसार शुक्र र बुध पछि यो ग्रहको दुरी सबैभन्दा कम छ। त्यसैले यसले पृथ्वीलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्दछ । वैदिक ज्योतिषमा पनि सूर्य ग्रहलाई धेरै महत्व दिईन्छ । सूर्यलाई क्रूर ग्रह मानिन्छ । यो ग्रह प्रभावी भयो भने जातकको समय वा भाग्य बदलिन्छ ।
ज्योतिषमा सूर्य ग्रहको महत्व
ज्योतिषमा सूर्यलाई आत्माको कारक मानिन्छ। यसको साथै ज्योतिषमा सूर्यलाई पिताको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि मानिन्छ। सूर्यको कारण ले नै पितासँग सन्तानको सम्बन्ध मधुर वा कटु बन्दछ। जहिले पनि जातकको कुण्डलीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा पहिले सूर्य ग्रहको स्थानलाई हेरिन्छ । किनकि ज्योतिषमा सूर्यलाई सफलता र सम्मानको कारक ग्रह भनिन्छ। सूर्य प्रभावी छ भने जातकले आफ्नो जीवनमा यश प्राप्त गर्दछ। यसका साथै व्यक्ति ओजस्वी र प्रतापी पनि हुन्छ। महिलाको कुण्डलीमा सूर्यलाई पतिको सफलताको कारक मानिन्छ। ज्योतिषमा सूर्यको नामबाट पनि राशिहरुलाई सम्बोधित गरिन्छ। जसलाई सूर्य राशि भनिन्छ । यदि जातकको कुण्डलीमा सूर्यको शुभ महादशा चलिरहेको छ भने आइतबारको दिन जातकलाई राम्रो फल प्राप्त हुन्छ । ज्योतिषमा सूर्य ग्रहलाई सिंह राशिको स्वामी मानिन्छ र मेष राशिमा यो ग्रह उच्च हुन्छ, जबकि तुला राशि सूर्य (sun) को नीच राशि मानिन्छ।
तपाईंको कुण्डलीमा सूर्य ग्रह कस्तो रहेको छ ? ज्योतिषीसंग परामर्शको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।
सूर्यको मानव जीवनमा प्रभाव
सूर्य हाम्रो ऊर्जाको स्त्रोत हो। यस ग्रहको कारणले नै हामी ऊर्जावान रहन्छौँ। प्रकृति सुचारु रूपले चल्नु पनि सूर्य को नै प्रभाव हो। यहि प्रकृतिको हिस्सा हामी पनि हौँ। जसले गर्दा सूर्यको प्रभाव हामीमा पर्दछ। ज्योतिषको अनुसार जुन जातकको कुण्डलीमा सूर्य ग्रह लग्नमा विराजमान हुन्छ, त्यसको अनुहार ठूलो र वृत्ताकार तथा आँखा पिङ्गल वर्णको हुन्छ। जातकको शरीरमा सूर्यले हृदयलाई दर्शाउँछ । राशिको काल पुरुष विभाजन अनुसार कुण्डलीमा सिंह राशिले हृदयको प्रतिनिधित्व गर्दछ । शारीरिक संरचना अनुसार सूर्य ग्रहले पुरुषको दायाँ आखाँ र स्त्रीको बायाँ आखालाई दर्शाउँछ।
ज्योतिष शास्त्रको अनुसार यदि कुनै जातकको कुण्डलीमा सूर्य ग्रह बली छ भने जातक आफ्नो जीवनमा सबै लक्ष्यको प्राप्ति गर्ने हुन्छ। जातकको आत्मविश्वास बलियो हुन्छ। यसको साथै ऊ प्रतिभावान र नेतृत्व क्षमताले परिपूर्ण हुन्छ। जीवनमा उसलाई मानसम्मानको कमी हुँदैन। जातक ऊर्जावान, आत्म-विश्वासी र आशावादी हुन्छ। जातकको उपस्थितिको कारणले घरमा ख़ुशी, आनन्दको माहौल बन्दछ। जातक दयालु हुन्छ।यस्ता व्यक्ति आफ्नो काममा र आफ्नो सम्बन्धमा वफ़ादार हुन्छन्। कुण्डलीमा सूर्य (sun) उच्च वा प्रभावी हुनुले सरकारी जागिरतिर पनि इशारा गर्दछ। जातकले जीवनमा उच्च पद प्राप्त गर्दछ ।
जुन जातकको कुण्डलीमा सूर्य ग्रह पीड़ित हुन्छ वा बलवान् हुँदैन, त्यस्ता जातकमा यसको गहिरो असर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जातक अहंकारी, क्रोधी हुन सक्छ र यसले गर्दा उसको काम बिग्रिन सक्छ। जातक सानो सानो कुरालाई लिएर उदास हुन सक्छ र ऊ अन्य कुनै व्यक्तिप्रति भरोसा गर्न सक्दैन। ऊ अरुको ईर्ष्या गर्ने र महत्वाकांक्षी हुनाले आत्म केन्द्रित वा स्वार्थी हुन सक्छ, जसले गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा कमी आउँन सक्छ।
सूर्य ग्रहको पौराणिक मान्यता
सूर्य ग्रहलाई सौर्य मण्डलको राजा मानिन्छ। यसको साथै हिन्दू पौराणिक कथाहरुमा सूर्य (sun) लाई देवता भनिएको छ। पौराणिक मान्यताको अनुसार सूर्य महर्षि कश्यपका पुत्र हुन् र यिनको माता अदिति हुन्। जसको कारण सूर्यको एक नाम आदित्य पनि हो । तपाईंले देख्नुभएको होला कि धेरै व्यक्ति सूर्यलाई नित्य जल चढाउने वा सूर्यलाई नमस्कार गर्ने गर्दछन्, किनकि ती व्यक्ति सूर्य ग्रहको चिकित्सकीय तथा आध्यात्मिक लाभ पाउनलाई यस्तो गर्दछन् । हिन्दू पंचांगको अनुसार आइतबारको दिन सूर्यको लागि समर्पित छ।
यन्त्र – सूर्य यन्त्र
मन्त्र - ऊँ भास्कराय नमः
रत्न - माणिक्य
रंग - पहेंलो / केसर
उपाय – यदि जातकको कुण्डलीमा सूर्य ग्रह कमजोर वा पीड़ित छ भने जातकले हृदय आदित्य स्त्रोतको पाठ गर्नुपर्छ । यसको साथै सूर्य (sun) ग्रहको उपासना गर्नु जातकको लागि शुभफलदायी हुन्छ।